Mampiseho mivandravandra ny tanjany ny malaso - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy tahotra, tsy henatra fa sahy mandrahona sy mihantsy ny mpitandro filaminana sy ireo mpitondra fanjakana ny malaso any amin’ny distrikan’i Manja. Tato anatin’ny volana vitsivitsy izao, tsy tambo isaina, ary nanao sesilany ny fanafihana. Aina sivily sy mpitandro filaminana maro hatramin’izao no nafoy, etsy ankilany ny omby tsy hita popoka. Mikatona tanteraka ny varavaran’ny kaominina rehetra mandrafitra ny disitrika, mananosarotra ny fifamoivoizana. Mitaintaina isan’andro araka izany ny mponina. Tsy sahy ny mipetraka an-tanana, na antoandro aza ny andro. Vao mainka moa amin’ny alina: any anaty ala no matory. Araka ny loharanom-baovao voaray tany an-toerana, tsy manakana olona ireto andiana malaso ireto fa omby ihany aloha hatreto no mbola ifantohany. Na dia eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana any an-toerana, atody miady amim-bato ihany ry zareo manoloana ny habetsahan’ireto malaso ireto sy ny tanjaka ananany: amin’ny alalan’ny fampiasany ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Hotazanim-potsiny no hiafarany e!
Betsaka ny mampiahiahy
Betsaka ny fanontaniana ilana valiana, mahalasa fisainana. Isan’izany ohatra ny nahazoan’ireto malaso ireto fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka itony. Mihoatra ny fampiasan’ny mpitandro filaminana mahazatra izany. Tranga nahavariana faharoa ihany koa, etsy ankilan’izay, ny nampiantranoana malaso 20 mahery tao amina hotely iray tao Manja tamin’ny alarobia 30 avrily teo. Voalaza moa tamin’izay fa efa feno ny «violon» ka tsy misy hasiana ny vaovao intsony. Ny nahagaga anefa, navotsotra avy eo ireto farany ny zomà 2 mey tamin’ny 3 ora maraina, raha ny nambaran’ireo fianakaviana akaiky tamin’ireto malaso ireto, raha sendra tonga hanatitra sakafo ry zareo. Famotsorana tsy nandalo fampanoavana tao Morondava akory. Tranga mbola tsy fahita hatramin’izay, fa niseho tany Manja. Ireto fianakaviana ireto ihany no nahafantarana fa misy manamboninahitra ambony no nanaovana fifampiraharahana mivantana. Azo heverina ve fa hitondra na hiantoka ny fandriam-pahalemana ny toe-javatra tahaka izany. Santionany ireo!
Miasa maina etsy andaniny ireo kartie mobily sy ireo lehiben’ny fokontany amin’ny fanomezam-baovao maro samy hafa. Tahaka izany ihany koa ny eny anivon’ny kaominina. Nefa izay tratra dia avotsotra. Izany no manery azy ireo handao ny toeram-piasany satria matahotra ny valifaty. Manampy trotraka ny tsy fisian’ny vola fanampiana avy amin’ny fanjakana foibe mba hahafahana mampandeha ny asa. Misedra olana araka izany ny mponina eo amin’ny filana na fanaovana taratasy eny anivon’ny kaominina. Hatreto aloha na ireo mpisehatra eo amin’ny lafiny fampandrosoana aza dia sahirana ihany koa amin’ny tsy fisian’ny mpitondra fanjakana eny ifotony. Lasa mandeha anjambany fotsiny ny asa atao. Efa nidina tany ifotony ny lehiben’ny faritr’i Menabe niaraka tamin’ny Minisitra Fienena Richard, zanak’i Manja, nijery akaiky ny zava-misy fa tsy nahitam-bokany. Ilaina ho voasambotra aloha ireo manamboninahitra mpiray tsikombakomba vao ho voavaha ity olan’ny tsy fandriam-pahalemana ity. Tahaka izany koa ny resaka bolabola. Raha tsy izany, mandany andro fotsiny.